Tag: email kubatanidzwa | Martech Zone
Tag: email kubatanidzwa
Izvo gumi Zvikamu Zve Zvakanyanya Kubudirira, Kubata Email Meseji Kopa
Chitatu, Nyamavhuvhu 11, 2021 Chitatu, Nyamavhuvhu 11, 2021 Douglas Karr
Kunyange email ichinge yafambira mberi zvishoma mumakumi emakore apfuura neHTML, inoteerera dhizaini, uye zvimwe zvinhu, iro rinotyaira email inoshanda ichiri iro kopi yemeseji yaunonyora. Ini ndinowanzo gumburwa nemaemail andinogashira kubva kumakambani kwandisingazive kuti ndivanaani, sei vakanditumira tsamba, kana zvavanotarisira kuti ndiite zvinotevera… uye zvinoguma nekuzvinyoresa kwangu se
Maitiro Eemail Engagement Anofananidza neKubatanidzwa Kwemagariro
Svondo, June 14, 2015 Mugovera, June 13, 2015 Douglas Karr
Kana ndichingoona maringe nekushandiswa mumusoro wechinyorwa mune zvekushambadzira, ndinowana zvishoma queasy. Iyi infographic pazasi kubva kwaDevesh Dhizaini inoita basa rakakura rekuisa mukutarisa kudiwa kwevatengi kuti vashandise email kukambani yavo. Handina mubvunzo nezvesimba reemail uye kugona senge tekinoroji yekutengesa yekusunda kukurudzira vanyoreri kutora matanho. Izvo zvinoshanda… uye munhu wese anofanira kuve
Kubatanidza Matekiniki Kuwedzera Yako Email Engagement
Chipiri, April 7, 2015 Matt Caldwell
Email yakazvipira kushambadziro kubvira pakatanga chikuva. Iko "tsamba yemagetsi" yakamboratidzira tsamba yeposvo muchimiro uye mashandiro, kuita kwepuratifomu kunoreva kuti meseji yega inofanira kunge iri yega, inochinjika uye ichiita kune vateereri vakasiyana. Gore rino, vatengesi vanofanirwa kumira kufunga nezveemail maemail uye matekiniki semastone zvishandiso, asi asi sezvikamu zvehombe hombe, inobata dambanemazwi. Kuita izvi kunotendera vashambadziri kuti vagadzire, vagadzirise uye vakangwara nazvo
14 Kufambira mberi uko Kunogona Kukanganisa Yako Email Kushambadzira muna 2015
Muvhuro, March 2, 2015 Douglas Karr
Kunze kwekuteerera email matemplate, tekinoroji iri kumashure kweemail haina kuchinja zvakanyanya mumakore gumi apfuura. Nekudaro, seimwe yeakasimba kudzoka pakushambadzira mari, vashambadziri vari kuona kudzoka kukuru kana vachinge vanyatso shandisa tekinoroji vachifambirana nemeseji yavari kugovera. Heano gumi nemaviri Kufambira mberi muTekinoroji Izvo zviri Kukanganisa Email Kushambadzira Chaiwo-nguva yemunhu inoenderana neyakachinjika-chiteshi data. Mahombe data masosi anofudza fungidziro uye zvemukati zvemukati mune email. Kubatana mameseji